के गदैछ नेकपा कार्यदल ? – Himalaya TV
Home » राजनीति » के गदैछ नेकपा कार्यदल ?
के गदैछ नेकपा कार्यदल ?
काठमाडाैं । स्थायी कमिटी बैठकमा सवैभन्दा पेचिलो बनेको संगठनात्मक एकताको विषय टुंगाउन नेकपाको कार्यदलले काम थालेको छ । पुस मसान्तभित्रै काम सक्ने कार्यदलको तयारी छ । तर, पार्टीको आन्तरिक शक्ति सन्तुलन मिलाउँदै बाँकी रहेका कमिटी र संगठनको एकता प्रस्ताव बनाउन त्यति सहज भने छैन् ।
नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकले बनाएको कार्यदललाई केन्द्रीय सदस्यको कार्यविभाजन, जिल्ला नेतृत्व बाँडफाँड, जनसंगठन, विभाग, परिषद र आयोगको एकीकरणका लागि नेतृत्वसहितको नाम तथा पोलिटव्युरो गठनसम्मको प्रष्ट खाका तयार पार्ने म्याण्डेट छ । पार्टी एकताको सात महिनासम्म पनि सवै तहको एकता नटुंगिएपछि मंसिर २९ बाट शुरु भई पुस १३ गते सकिएको बैठबबाट बनेको कार्यदलले सकेसम्म पुसमसान्तभित्रै काम सक्ने योजना बनाएको छ ।
अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डले पुस १६ गते कार्यदलका सवै सदस्यलाई बालुवाटार बोलाएर समयसीमाभित्रै काम गर्न निर्देशन दिएपछि कार्यदल काम टुंगाउन लगातार छलफलमा छ । विधान र प्रदेश कमिटीसम्बन्धी पूर्ववत निर्णय, जसलाई स्थायी कमिटि सदस्यले उठाएका थिए, ती मुद्दालाई पनि कार्यदलले छलफलमा ल्याएको छ । त्यसैले कार्यदलले बाँकी रहेका एकताका काममात्रै होइन, पूर्ववत निर्णय पुनरावलोकन गर्ने गरी केही प्रस्ताव तयार पार्नेछ ।
कार्यदललको निर्णय अन्तिम हुने होइन । त्यसैले अहिले कार्यदलभित्र भैरहेको काम गोप्य राख्ने आचारसंहिता नै बनेको छ । कार्यदलले आफुले तयार पारेको प्रस्ताव सवैभन्दा पहिला पार्टी अध्यक्षद्धय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बुझाउनेछ । त्यसपछि सचिवालय, स्थायी कमिटी हुँदै केन्द्रीय कमिटीबाट अन्तिम अनुमोदन हुनेछ ।
तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच गत जेठ ३ मा पार्टी एकता भएपनि अहिलेसम्म धेरै कमिटीको एकता हुन बाँकी छ । बरु, यस अघि संगठनात्मक एकतासम्बन्धी सचिवालयबाट लिइएका निर्णय विवादमा तानिए र नेकपाभित्र ठूलै लफडा भयो । विगतमा पनि बामठबन्धन बनेदेखि धेरै काम कार्यदलले टुंगाएका छन् ।
चुनावमा टिकट बाँडफाँटदेखि पार्टी एकतासम्म र जिम्मेवारी चयनदेखि पार्टीको विधि-विधान लेखनसम्म कार्यदलले नै टुङ्ग्याएका थिए । त्यसैले अहिले पनि कार्यदलमाथि नेकपाभित्र निकै चासो छ ।
रामबहादुर थापा बादल, विष्णु पौडेल, योगश भट्टराई, वर्षमान पुन, शंकर पोखरेल, सुरेन्द्र पाण्डे, लेखराज भटट्, बेदुराम भुसाल र रघुवीर महासेठ रहेको कार्यदल पार्टीको आन्तरिक शक्तिसङ्घर्ष र गुटगुत हिसाबले सन्तुलित नै देखिन्छ । त्यसैले अहिलेको नौ सदस्यीय कार्यदलले नेकपाभित्रको सङ्गठनात्मक एकतासम्बन्धी सबै काम सक्यो भने नेकपाका लागि यो ठूलो राहतको विषय हुनेछ ।